Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta kulankooda ugaga hadlay 3 qodob - Hablaha Media Network
Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta kulankooda ugaga hadlay 3 qodob
HMN:- Xildhibaannada aqalka sare ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho iyagoo ugaga hadlay qoddobo ay ka mid ahaayeen xeer hoosaadka aqalka sare,ansixinta warbixinta guddiga shaqaaleysiinta iyo warbixinta guddiga amniga.
Kulankan oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/laahi ayaa waxaa soo xaadirtay 35 mudane. Furitaanka kulanka kadib ayaa waxaa ugu horeyntii senatarada ay ka doodeen qodobka ansixinta warbixinta guddiga shaqaaleysiinta waxayna isku raaceen in la shaqaaleysiiyo 61 xubnood oo horey guddiga arrintan ku howlanaa ay soo jeediyeen, waxayna shaqaalahan ka shaqeyn doonaan 5 waaxood oo horey guddigan usoo bandhigay.
61-kaan shaqaale waxaa ku jira 7 sharci yaqaan oo xubnaha aqalka sare kala shaqeyn doona arrimaha sharciyadda la xiriira. Qoddobka labaad ee ahaa warbixinta guddiga amniga ayaa xildhibaannada aqalka sare waxay warbixin ka dhageysteen guddiga amniga iyadoo markii la dhagaysanayay warbixintaasi dibadda loo saaray dhammaan saxaafadda.
Sidoo kale warbixinta kadib waxaa si kooban uga dooday xildhibaannada aqalka sare iyadoo inta ay doodda iyo warbixinta socoteyba saxaafaddu dibadda ka joogeen.
Ugu dambeyntii waxa senatarada aqalka sare waxaa loo qeybiyay xeer hoosaadka Aqalka Sare oo ay Guddiga qaabilsanaa diyaarinta xeer hoosaadka ay soo diyaariyeen, waxayna soo akhrisan doonaan illaa maalinta Sabtida ah oo laga doodi doono.
Guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah laga doodayo xeer-hoosaadka maanta loo qeybiyey mudanayaasha iyo sidoo kale arrinta ku aadan warbixintii guddiga amniga soo diyaariyey iyo meel marintooda.